Trump: Maxamuud Cabaas wuxuu ahaa Aabe oo kale, Netanyahu ayaa ahaa caqabad | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Trump: Maxamuud Cabaas wuxuu ahaa Aabe oo kale, Netanyahu ayaa ahaa caqabad
Trump: Maxamuud Cabaas wuxuu ahaa Aabe oo kale, Netanyahu ayaa ahaa caqabad
Washington (Dalkaan.com) – Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dareemay in madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas uu ahaa “aabe oo kale” intii ay socdeen wada-hadallo la doonayey in heshiis lagu dhex-dhigo Israel iyo Falastiin.
Trump ayaa arrintan ku sheegay wareysi uu siiyey weriye Israeli ah oo lagu magacaabo Barak Ravid, oo qoray buugga Trump’s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East.
Trump iyo wiilka uu sodogga u yahay ee Jared Kushner ayaa si xooggan u cambaareyn jiray Falastiiniyiinta sababo la xiriira inay diideen heshiikii mamaulka Trump ee looga magac daray “Peace to Prosperity” kaasi oo Falastiiniyiinta lagu siin lahaa balaayiin dollar si ay uga tagaan xuquuqdooda siyaasadeed.
Hase yeeshee Trump ayaa sheegay in xilligii ugu horreeyey madaxtinimadiisa uu dareemay in Netanyahu uu ahaa caqabadda ugu weyn ee nabadda ee aanu aheyn Cabaas.
Trump ayaa wareysiga ku sheegay in Cabaas uu si ka badan ra’iisul wasaarihii hore ee Israel Benjamin Netanyahu “u doonayey inuu heshiis galayo.”
“Kulan aad u weyn ayaan la yeeshay Cabaas. Waqti badan ayeynu wada qaadanay, oo aan waxyaabo badan uga hadalnay. Wuxuu ahaa aabe oo kale, waxaan ula jeedaa aad ayuu u wanaagsanaa,” ayuu yiri Trump.
“Waxaan u haystay inaysan ka suurta-gelin Falastiiniyiinta, oo Israa’iiliyiinta ay wax walba u sameyn lahaayeen in heshiis nabadeed la gaaro. Balse waxaan ogaaday in taasi aysan sax aheyn,” ayuu yiri.
Mid ka mid ah kulamii uu Netanyahu la yeeshay, Trump ayaa dib u xusuustay inuu ku yiri “Kulan wanaagsan ayaan la qaatay Cabaas, heshiisna waa la gaari karaa.”
Hase yeeshee jawaabta Netanyahu ayaa noqotay diidmo, wuxuuna sida uu Trump sheegay yiri “Aan ka fakarno, yeynaan deg degin.”
Trump ayaa intaas ku daray “Markii uu sidaas yiri ayaan iri ‘ukaadi, oo ma dooneysid miyaa heshiis,’ kadibna wuxuu yiri ‘aah, aah.’ Xaqiiqda waxay tahay in Bibi uusan marnaba dooneyn heshiis.” Bibi waa naaneysta Netanyahu.
Trump ayaa sheegay inuusan la hadlin Netanyahu sidii uu xukunka uga degay, isaga oo ka careysan inuu u hambalyeeyey Joe Biden markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha Mareykanka.
“Ma jirto cid Bibi u sameysay waxa aan u sameeyey. Welina waan jeclahay Bibi. Wuxuu ahaa nin aan u sameeyey wax ka badan wax kasta oo aan qof u sameeyey. Balse waxaan sidoo kale jeclahay daacadnimada,” ayuu yiri Trump.
“Qofkii ugu horreeyey ee Biden u hambalyeeyey wuxuu ahaa Bibi. Umana hamblyeyn oo kaliya’e wuxuu iska duubay muuqaal. Bibi wuu ka aamusi kara. Wuxuu sameeyey khalad weyn.”
Netanyhu ayaa ka ajwaabay hadallada Trump wuxuuna yiri “Waan ku faraxsanahay tabarucaadda weyn ee Trump uu u sameeyey Israel iyo amnigeeda.”
Intii uu Trump madaxweynaha ahaa, Mareykanka ayaa Jerusalem u aqoonsaday caasimadda Israel iyo sidoo kale in dhulka Golan Height ee Syria uu yahay dhul Israel.’
Sidoo kale uma arkin Daanta Galbeed dhul la haysto, wuxuuna maamulka Trump ogolaaday deegaameynta Yahuudda ee halkaas.
Washington (Caasimada Online) – Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha wakiillada ee dowladda Mareykanka ayaa Madaxweynihii hore Farmaajo u soo jeedisay in la...
Xogta Sababta Qaraxyada Iyo Dilalka Ugu Badan Yihiin Deegaanada Hawiye 22/11/2021